Amin'ny fo mietry
Fa izao no lazain’ ny Iray avo sy manerinerina, izay monina mandrakizay, masina no anarany: Ao amin’ ny fitoerana avo sy masina no onenako, ary ao amin’ ny torotoro fo sy ny manetry tena, hamelombelona ny fanahin’ ny manetry tena sy hamelombelona ny fon’ny torotoro fo. Isa.57 :15
Izay rehetra mankeo amin'nyTenin'Andriamanitra hahazo tari-dalana, amin'ny saina mietry sy mangetaheta ary vonona hahalala ny hafa‑pamonjena, dia hahafantatra izay lazain'ny Soratra Masina. Fa ireo izay mitondra fisainana tsy eken'ny Teny eo amin' ny fandinihana izany dia manala eo amin'ny fikarohana ny fisainana izay tsy nomeny akory. Tsy hiteny amin'ny saina izay tsy miraharaha ny Tompo. Tsy hanome tari-dalana ho an'izay minia ny tsy hilefitra sy maloto Izy. Fa mampianatra ny saina manaiky rehetra hanaraka ny heviny ny mpaka fanahy, ary iriny ny tsy hampisy fiantraikany ny lalàn'Andriamanitra marina.
Ilaintsika ny mampietry ny fontsika, ary amim-pahatokiana sy fanajana no hikatsahantsika ny Tenin'ny flainana; fa ny saina mietry sy torotoro ihany no afaka mahita fahazavana. Tsy maintsy voaomana handray ny fahamarinana ny fo sy ny saina ary ny fanahy. Tsy maintsy misy fahanginana ao amin'ny fanahy. Tsy maintsy babon'i Kristy ny fisainana. Ny fahalalan'ny tena manokana sy fananana ny ampy mieboebo dia tsy maintsy mahazo tsiny eo anatrehan’nyTenin'Andriamanitra.
Miteny amin'ny fo izay mietry eo anatrehany ny Tompo. Eo amin'ny alitarambavaka, rehefa tohina noho ny finoana ny seza fian­drianan'ny fahasoavana, dia handray avy amin'ny tanan' Andriamanitra izany jiro mahazavan'ny lanitra izany isika hanazava ny fahamai­zinantsika ary handresy lahatra antsika amin'ny filan­tsika ara-panahy. Raisin'ny Fanahy Masina ny zavatry ny lanitra ka ambarany amin'izay mikatsaka marina ny haren'ny lanitra. Raha manolo-tena hotarihiny isika dia hotarihiny ho amin'ny fahazavana rehetra isika.
Rehefa mibanjina ny voninahitr'i Kristy isika dia hovana ho tahaka ny endriny. Manana izany finoana izay miasa amin'ny fitiavana sy manadio ny fanahy izany isika. Nohavaozina ny fontsika, ary namboarina hanana faniriana hankatô an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra isika. RH, 15 Desambra 1896